यस्ता पुरुष रुचाउँछन् महिलाहरू – जनता न्युज
यस्ता पुरुष रुचाउँछन् महिलाहरू
१८ बैशाख २०७८, शनिबार ०९:०३
सामान्य कदका कतिपय पुरुष पनि सहजै महिलाका प्रिय पात्र बन्न सक्छन् भने कतिपयसँग महिलाहरू दूरी कायम राख्न चाहन्छन् ।
कतिपय पुरुष सदैव आकर्षक महिलाहरूबाट घेरिन्छन् र आफूसरहका अन्य पुरुषको तुलनामा महिला साथीसँग खुला रूपमा जिउँछन् । आखिर त्यस्तो के हुन्छ उनीहरूमा जसले महिलाहरूलाई आकर्षित तुल्याउँछ ? कस्ता पुरुष महिलाहरूका रुचिभित्र पर्छन् ? भन्ने विषयमा अनेकौं सर्वेक्षण भएका छन् । यही क्रममा एक अध्ययन भन्छ–महिलाहरू पुरुषको लुक्सबाट भन्दा व्यवहारबाट बढी प्रभावित हुन्छन् ।